News – Mandalar Hospital
မြန်မာနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကို ကူးစက်ခံရပီဆိုလျှင်- ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အဆစ်များ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ အနံမရခြင်း၊ ရုတ်တရက် အရသာပျောက်သွားခြင်း ခန္ဓာကိုယ် ယားယံခြင်း စသည့် လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ထိုသူအများစုဟာ ရောဂါလက္ခဏာ စပြပြီး (၁၀)ရက်အကြာ သက်သာလာလျှင် ဆေးရုံမှဆင်းနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ HDU, ICU လူနာများသည် (၂၁) ဆေးကုသမှုခံယူပြီး သက်သာလျှင် ဆေးရုံမှ ဆင်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဆေးရုံကဆင်းခြင်းသည် ရောဂါအရှင်းပျောက်သွားခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ အသက်အရွယ်ကြီးသူများသာမက ငယ်ရွယ်သူများ၌ပင် ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီး- – ချောင်းဆိုးခြင်း – မောခြင်း – ရင်တုန်ခြင်း – ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း –…
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေများ ဤအစားအစာများ ရှောင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိအတွက်သာမက မိမိ၏ သန္ဓေသားပါ ကျန်းမာစေရန်အတွက် အစားသောက်၊ အနေထိုင်ကို အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ရှောင်ကြဉ် သင့်သည့် အစားစာများကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အသားစိမ်းများ။ သွေးပါနေသော အသားများ၊ ပန်းရောင် ဖြစ်နေသော အသားများကို အထူးရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။ ဘဲသား၊ အမဲသား၊ ကြက်သား စသည့် အသားစိမ်းများတွင် အစာအဆိပ်သင့်မှုကို တိုးပွားစေသည့်အပြင် သန္ဓေသားကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်သည့် Toxoplasma ကဲ့သို့သော ဘတ်တီးရီးယားနဲ့ ကပ်ပါးပိုးများ ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် အသားစိမ်းများကို စားသုံးခြင်းကို အထူးရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ ကဖိန်းဓာတ်ပါသော အရာများ။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ အချိုရည်၊ ကိုကိုး စသည်တို့သည် ကဖိန်းဓာတ်ပါဝင် သည့်အတွက် အချင်းမှ တစ်ဆင့် သန္ဓေသားဆီသို့…
ဗီတာမင် Dကို နေရောင်ခြည်မှ ပေးသော ဗီတာမင်ဟူ၍ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ပါက … အရိုးပျော့ရောဂါ၊ အရိုးပွရောဂါ၊ အရိုးကျိုးလွယ်ခြင်း၊ မကြာခဏ နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း၊ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်း၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများ ခံစားရခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ အနာအကျက် နှေးခြင်း၊ ရောဂါပိုး အလွယ်တကူ ဝင်နိုင်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ စသည့် ရောဂါများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ * လူတစ်ဦးသည် တစ်နေ့တွင် ဗီတာမင် D ပမာဏ 400 မှ 800 IU လိုအပ်ပါသည်။ ဗီတာမင် Dကို ဘယ်အရာများမှ ရရှိနိုင်ပါသလဲ? ၁။လူ့ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားနှင့် နေရောင်ခြည် ထိတွေ့မိသည့်အခါတွင် ရရှိနိုင်သည့်အတွက် အထူးသဖြင့် နံနက်ခင်း နေရောင်ခြည်အောက်တွင် ၁၅မိနစ် မှ…
ဒူးနာခြင်းကို အဓိက ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများမှာ- အရိုးကျိုးခြင်း၊ ဒူးအရည်အိတ် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရိုးနုစုတ်ပြဲခြင်း၊ ဒူးအရှေ့ဘက် အရွတ် ထိခိုက်မိခြင်း၊ ဂေါက်ရောဂါ၊ အရိုးအဆစ်အတွင်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ်အတွင်းရှိ အိတ်များရောင်ရမ်းခြင်း အဆစ်အတွင်း သွေးစီးယိုခြင်း စသည့် ရောဂါများကြောင့် ဒူးနာခြင်းကို အဓိက ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ………………………………………………………… ………………………………………………………… ဒူးနာခြင်းကို ဘယ်လို ကုသကြမလဲ? မိမိကိုယ်တိုင် အိမ်တွင် ပြုလုပ်နိုင်သော အရာများ… လမ်းပုံမှန်လျှောက်ပေးပါ၊ မပြင်းထန်သော ဒူးနှင့် ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းများကို တစ်နေ့လျှင် နာရီဝက်ခန့် ပြုလုပ်ပေးပါ၊ အရိုး၊အဆစ်သန်မာစေသော အစားစာများကို စားသုံးပေးပါ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ဆေးများကို အချိန်မှန် သောက်သုံးပေးပါ၊ ဒူးကို အားပြုရသော အလုပ်များကို တတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။ အထက်ပါ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် မသက်သာပါက အရိုး၊ အကြော၊…
သွေးတိုးရောဂါရှိသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် မိမိတွင် သွေးတိုးရောဂါ ရှိကြောင်း သတိမထားမိတတ်သောကြောင့် ဆေးပညာရှင်များက သွေးတိုးရောဂါကို အသံတိတ်လူသတ်သမား (Silent Killer) ဟုပင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါသည်။ ဘယ်လိုလူတွေမှာ အဖြစ်များသလဲ??? အသက်၄၀ကျော်သူများ၊ ဆေးလိပ်၊ အရက် အလွန်အကျွံ သောက်သုံးသူများ၊ ကိုယ်အလေးချိန် များသူများ၊ စိတ်ဖီစီးမှု များသူများ၊ မကြာခဏ သွေးပေါင်တက်တတ်သူများ တွင် အဖြစ်များပါသည်။ သွေးတိုးရောဂါသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လက္ခဏာမပြတတ်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်- ၁။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ၂။ ဇာတ်ကြောတက်ခြင်း၊ ၃။ မူးဝေခြင်း၊ ၄။ အသက်ရှူ မြန်လာခြင်း စသည်တို့ကို ခံစားရတတ်ကြပါသည်။ သွေးတိုးရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါ ပြဿနာများ- လေဖြတ်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်သွေးကြော ပေါက်ခြင်း၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊…